Izindatshana zikaHarrison Painter Martech Zone |
Imibhalo nge UHarrison Painter
NgoLwesithathu, ngoMashi 8, 2017 UHarrison Painter
Iqiniso elingokoqobo neli-augmented lizodlala indima enkulu ekusaseni lakho. I-TechCrunch ibikezela ukuthi i-AR ephathekayo kungenzeka ibe yimakethe eyizigidigidi ezingama- $ 100 eminyakeni engama-4! Akunandaba ukuthi usebenzela inkampani yobuchwepheshe obunqenqemeni, noma endaweni yokubukisa edayisa ifenisha yasehhovisi, ibhizinisi lakho lizozuza ngandlela thile ngokuhlangenwe nakho kokumaketha okucwilisiwe. Uyini umehluko phakathi kwe-VR ne-AR? Iqiniso langempela (i-VR) ukuzijabulisa kwedijithali kwefayela le-
Ividiyo ingenye yamathuluzi wokukhangisa anamandla kakhulu ku-arsenal yakho yokwandisa ukufinyelela kwezokumaketha, kepha kuvame ukunganakwa, ukusetshenziswa kabi kanye / noma ukungaqondwa kahle. Akungabazeki ukuthi ukukhiqizwa kokuqukethwe kwamavidiyo kuyesabisa. Izinsiza kusebenza zingabiza; inqubo yokuhlela edla isikhathi, nokuthola ukuzethemba phambi kwekhamera akulula ngaso sonke isikhathi. Ngokujabulisayo sinezinketho eziningi kakhulu ezikhona namuhla ukusiza ukunqoba lezi zinselelo. Ama-smartphone amasha sha anikela ngevidiyo engu-4K, ukuhlela